Hlola isipelingi kumawebhusayithi > UVielhuber David
Hlola isipelingi kumawebhusayithi11
Ukuhlolwa kwesipelingi nohlelo lolimi manje sekuyimishini ejwayelekile ezinhlelweni zokucubungula amagama - kepha ukuhlola isipelingi sewebhusayithi ngokuzenzakalela kube nzima kakhulu kuze kube manje. I-Google Chrome ithatha isinyathelo sokuqala kule ndlela ngesheke elihlanganisiwe ezinkambeni zokufaka zemigqa eminingi (textarea). Manje kukhona insizakalo eyenza lokhu kwenzeke kuwo wonke amawebhusayithi.
Insizakalo ye- Duden-Web-Proof ihlola amawebhusayithi ngokucindezela inkinobho ngaphandle kokufaka isoftware eyengeziwe - kufanele ufake i-URL kuphela. Ngemuva kokuhlolwa, umsebenzisi uthola umbiko wokuhlola oningiliziwe neziphakamiso zokulungiswa kohlelo lolimi nesipelingi, ezingabukwa ngokuhlanganyela kuwebhusayithi.
Ukunikezwa akukho mahhala, noma kunjalo: intengo eyisisekelo ngu- € 5.89 (kufaka ne-VAT) yamakhasi angafika kwanguhlanu. Abasebenzisi abazimele basengahlola insiza mahhala: I-URL eyodwa ngosuku kungenzeka. Isevisi igcina kuphela isizinda sempande ngaphakathi futhi ngokusobala ihlukanisa ngokuya ngalesi sici. Kungenzeka ukuthi iwebhusayithi yakho yonke ihlolwe mahhala kusetshenziswa izinsizakalo ezimfushane ze-URL njenge-bit.ly nokunye okunjalo.